Ndisenza njani ukuba isiphequluli sam sivule ngokupheleleyo? - Faq
Eyona > Faq > Qala i-chrome eyenziwe nkulu-khangela izisombululo
Qala i-chrome eyenziwe nkulu-khangela izisombululo
Ndisenza njani ukuba isiphequluli sam sivule ngokupheleleyo?
Vulaudweliso lwenkqubo, yandisa ifestile ngokunqakraza uphawu lwesikwere kwikona ephezulu ngasekunene. Emva koko, cinezela kwaye ubambe iqhosha le Ctrl kwaye uvale inkqubo. PhendulavulaInkqubo ukubona ukuba ikhonaivulanjengeyenziwe nkulu. Iintsholongwane ngamanye amaxesha zinokubangela iinkqubo kunye neenkquboukuvulangokuchanekileyo, kubandakanya hayiukuvulanjengeyenziwe nkulu.30 kweyeThupha. 2020
Molo, nguGary ovela kwi-MacMost.com. Namhlanje ndiza kukubonisa iindlela ezintathu ezahlukeneyo onokuthi wandise ngazo iwindow kwi-Mac.
IMacMost yaziswa kuwe ngenxa yeqela elikhulu labantu abangaphezulu kwama-700. Yiya kwi-MacMost.com/patreon.
Apho ungafunda ngakumbi malunga nephulo lePatreon. Sijoyine ukuze ufumane umxholo okhethekileyo kunye nezaphulelo zekhosi. Inani lamaxesha abasebenzisi beMac bafuna ukwandisa ifestile kwiscreen sabo.
Oku kunokuba zizinto ezintathu ezahlukeneyo ezithetha kwaye zihlala ziyinto efunwa ngabantu kukwandisa indlela yesithathu. Kodwa ezimbini zokuqala zizonke abanokuzifumana. Makhe ndichaze, ke nantsi ndinamaphepha avulekileyo kwi-app yamaphepha.
Ngoku ndifuna oku ukugcwalisa isikrini. Zimbini iindlela ezicacileyo zokwenza oku abantu abaqhele ukuya kuzo, kodwa akukho namnye kubo obanika isiphumo abasifunayo. Eyokuqala kukucofa nje iqhosha eliluhlaza apha.
Xa usenza oko iya kungena kwimowudi yescreen esigcweleyo. Ngoku apha uyabona ukuba ndiyayihambisa isikhombisi apho indinika ukhetho kunye nokwenza ukuba imowudi yescreen esigcweleyo xa ukhetho lokuqala lukhona. Emva koko ezinye iindlela r ezinje ngeTayile yasekhohlo nasekunene.
Ke, ukucofa iqhosha eliluhlaza okanye ukukhetha Faka iScreen esigcweleyo kwenza kwaloo nto. Ungaya kwakhona ukujonga. Ngokwesiqhelo kukho Enter Full Screen command ngokudibanisa isitshixo.
Uthatha iwindow kwimowudi yesikrini esigcweleyo. Imenyu yemenyu iyanyamalala. Ukuba ubune-dock apho, iyanyamalala.
Ithatha yonke loo nto. Into oyenzileyo kukudala usetyenziso olupheleleyo lwescreen. Xa ungena kuLawulo lweMishini usebenzisa i Ctrl isitshixo kunye notolo oluphezulu apha ungabona ukuba unedesktop kunye nephepha leapp lesikrini elipheleleyo.
Ubuyela kwi-desktop yakho kwaye mhlawumbi unezinye iiapps ezisebenza apho kwaye ungaya kulawula utolo lubuyela kumaphepha. Unokusebenzisa uLawulo lwasekhohlo kunye noLawulo lwasekunene. Kodwa injongo yayingekokwenza usetyenziso olupheleleyo.
Kwakulula ukwenza iwindow ibe nkulu ngangokunokwenzeka. Ke masiphume kwimowudi epheleleyo yesikrini apha, ndiyakwenza oku ngokuhambisa isikhombisi sam apha phezulu kwaye ucofe iqhosha eliluhlaza kwakhona. Into yesibini abantu abayenzayo kukusebenzisa iWindows, Zoom.
Uyabona iWindows, Nciphisa ukubeka ifestile kwi-dock. Kukho ukusondeza into abantu abaninzi abacinga ukuba yindlela kaMac yokwenza ngcono. Kodwa xa ndikhetha ukusondeza le nto ndiyifumanayo.
Khange iphakanyiswe konke konke. Yenza ntoni? Ewe, iyenzile nkulu iwindow, kodwa kuphela kwinqanaba lokufunekayo kwifestile. Ke masisondeze kwakhona ukubona ukuba iya kubuya ngantoni le nto; uyabona apha, uxwebhu lunendawo encinci apha ngasekhohlo nasekunene.
Iibhola ezisecaleni zizele ngokupheleleyo. Ke xa ndizongelanga ngaphakathi, ifestile yayihlengahlengisiwe ukuya kubungakanani obukhulu obufunekayo apha. Olu xwebhu apha kumaphepha luzele ngokupheleleyo, yonke into iyakulunga, awuyi kuphoswa nto.
Into edidayo apha kukuba kwezinye ii -apps, ukuba wenza okufanayo, Window, Zoomit empeleni igcwalisa isikrini. Kule meko, kwiapp yeMaphu, unale ndawo inkulu iguquguqukayo apha. Oku kuyakwandisa ifestile kangangoko kunokwenzeka ukuba ilingane isikrini, ukuze ndisebenzise ukusondeza ukutshintsha phakathi kwezi modeli.
Enye indlela yokuya kusondeza kukucofa kabini ibha yesihloko kwaye ngokucacileyo uphephe onke amaqhosha. Kwakhona, ukuba ubamba iqhosha lokukhetha xa uhambisa isikhombisi sakho phezu kweqhosha eliluhlaza, uza kulubona olu tshintsho kwi-Zoom. Ungayikhetha le nto, okanye unokukhetha nje ucofe iqhosha eliluhlaza kwaye iya kusondeza nalapho.
Nanku omnye umzekelo. NgeSafari ndicofa kabini isihloko. Kwibar uyabona ukuba ayizisi kubungakanani obukhulu.
Yifestile kuphela eyandisiweyo ukuya kubungakanani obukhulu obufunekayo ukuze ujonge kakuhle amaphepha ewebhu. Ingxaki ngokusondeza kwimeko enje. Zonke ezi zinto unokukhetha kuzo; Nqakraza kabini ibha yesihloko okanye ucofe iqhosha eliluhlaza ukwandisa ifestile kuphela njengoko kufuneka.
Ifestile ayizukugcwalisa yonke isikrini. Ke indlela yesithathu yindlela engaguqukiyo yokuhlala undivumela ndikubonise indlela enzima ngoku. Indlela enzima kukurhuqa amacala efestile kwaye ugcwalise yonke into, okanye usebenzise iikona zefestile- ndingasebenzisa iikona zale festile apha - tsala ikona ephezulu ngasekhohlo ukuya ngasekhohlo, tsala ezantsi ekunene kwikona ezantsi ekunene.
Ngoku ndiyifumana le nto ndiyifunayo. Kodwa zizenzo ezininzi zokufezekisa loo nto. Ngaba ikhona indlela ekhawulezayo yokwenza oku? Kuya kuvela ukuba ikho enye.
Yabona, ukuba ubambe iqhosha loKhetho kwaye urhuqe into, iya kutsala icala kunye nelinye icala. Umzekelo, ukuba ndirhuqa icala lasekunene lefestile apha, ungabona ukuba itsalela kwicala lasekunene lefestile. Kodwa ukuba ndibambe iqhosha lokukhetha kwaye nditsale icala lasekunene, ungaliyeka icala lasekhohlo lihambe nayo.
Into efanayo xa nditsala ezantsi. Kodwa xa ndibambe iqhosha lokukhetha, ezantsi kunye nokuhamba okuphezulu ziyahlangana. Oku kuyasebenza nakwiikona.
Ke ukuba ndirhuqa ikona esezantsi ekhohlo, ungabona nje oko kutsalwa. Kodwa xa ndibambe iqhosha lokukhetha, iikona ezisezantsi ekhohlo kunye nasekunene zitsaliwe. Iikona ezichaseneyo zitsaliwe ngaxeshanye.
Ngoku qaphela ukuba xa ucofa kabini kwicala okanye kwikona, yonke into iyangena endaweni endaweni yokutsala indlela yakho. Ke ndinokucofa kabini kwicala lasekhohlo apho kwaye uyayibona ifika kwindawo esekhohlo. Ndingacofa kabini phezulu kwaye ucofe phezulu.
Xa ndicofa kabini kwikona ephezulu ngasekhohlo uthi iqhekeza endaweni ephezulu ngasekhohlo. Ke xa ndidibanisa ezi zinto zimbini, bamba iqhosha lokukhetha kwaye ucofe kabini kuyo nayiphi na ikona, kwenzeka ntoni kukuba ikona ifike kwikona yesikrini kwaye enye ejongene nayo ikwikona yesikrini. Ke, makhe ndicofe kabini kwikona ephezulu ngasekhohlo kwaye uyayibona ngoku igcwalisa umfanekiso, oku kusebenza ngayo nayiphi na ikona kwikona nganye kunye nekona ejongene nomphetho wesikrini iya kugcwalisa isikrini.
Ke ukuba ufuna ukwandisa iwindow ukugcwalisa yonke ikhusi kodwa ushiye imenyu yebar apho, ushiya ezinye iiwindow zifihliwe ngaphantsi, emva koko konke oku kufuneka ukwenze kukucofa kabini ukhetho nakweliphi ikona lewindow kwaye izakugcwalisa isikrini ngefestile. Ukujonga oku, ungaqala wandise iwindow kwimowudi yescreen esigcweleyo. Cofa kwiqhosha eliluhlaza kwaye ngoku lisikrini esipheleleyo sedesktop.
Ukuba ufuna ukusondeza ngaphakathi, okuza kuyenza nkulu iwindow kuphela njengoko uyifunayo, khetha nokuba yiWindows, Zoom, okanye ubambe iqhosha lokukhetha kwaye ucofe iqhosha eliluhlaza okanye ucofe kabini ibha yesihloko. Ukuba ufuna iwindow ukugcwalisa ikhusi ngaphandle kokuqulathiweyo kwefestile, cofa kabini kwenye yeekona ezine.
Kutheni iGoogle Chrome yam ivula incinci?
Ukuba eyakhoChromeubungakanani befestile nguencinci, usenokuba ucofe ngempazamo iqhosha elithi 'Buyisela ezantsi'. Ukuyalungisakuyo, cofa iqhosha elithi 'Khulisa' phezulu kwesikrini. IWindows iza nesixhobo seMagnifier esandisa iscreen sonke okanye iinxalenye zomboniso.
Molweni nonke! Namhlanje ndiza kukubonisa indlela yokujonga okanye ukucima amagama agciniweyo agcinwe kwiiakhawunti zakho ezikwi-intanethi kwiGoogle Chrome, Opera, Yandex.Browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge okanye ezinye iibrawuza. Uya kufunda kwakhona ukuba ukuseta njani ukugcwalisa ngokuzenzekelayo ubhaliso kunye needilesi kunye neenkcukacha zebhanki.
Zonke iibrowser zanamhlanje zinendawo yokugcina iphasiwedi. Ikusindisa kufuneka ufake iinkcukacha zakho zobhaliso ngalo lonke ixesha- bambalwa abantu abanokukhumbula amakhulukhulu okungena kunye neepassword zokuKhumbula iiwebhusayithi zabo abazithandayo kunye neenkonzo ze-Intanethi, kodwa kuya kufuneka wenze ntoni xa ukugcwalisa ngokuzenzekelayo kungasebenzi ngesizathu esithile kwaye awukhumbuli lokugqitha okanye ungene? Enye imeko kuxa ufuna ukucima yonke idatha egcwaliswe ngokuzenzekelayo kwisikhangeli sakho, o.k.t.
B. Ukungena, iipassword, iidilesi kunye nolwazi lwebhanki ukuqinisekisa ukuba abanye abantu abaziboni. Masifumanise ukuba ungagcina njani iiphasiwedi kunye nenye idatha yokuGcwalisa ngokuZenzekelayo kunye nendlela yokufumana kunye nokukhusela onke amagama agciniweyo kwisikhangeli sakho.
Masiqale ngeGoogle Chrome. Jonga onke amagama agqithisiweyo agcinwe ngumkhangeli zincwadi: • Yiya kwi Imenyu / Useto / Okuphambili / Amagama agqithisiweyo kunye neefom / Lawula iiPassword • Le menyu iqulethe onke amagama agciniweyo agcinwe ngumkhangeli wakho kwifomathi yeWebhusayithi- Igama lomsebenzisi- Iphasiwedi • Ngokuzenzekelayo iphasiwedi ifihliwe. Cofa amaqhosha amachaphaza amathathu ecaleni kwewebhusayithi ethile kwaye ukhethe Iinkcukacha. Cofa iqhosha elime ngamehlo ukujonga iphasiwedi. • Nangona kunjalo, unokuyibona kuphela ukuba inqaku linikwe amandla. Zonke iibrawuza zinalo msebenzi owenziweyo. • Ukuba awufuni ukuba ipassword yakho kunye neepawundi zigcinwe - cima lo msebenzi kwaye ufake ukungena kunye neepassword ngalo lonke ixesha.
Kwibhrawuza yeYandex: • Yiya kwi Imenyu / Useto / Okuphambili / amagama agqithisiweyo kunye neefom / Lawula iiPassword • Le menyu iqulethe onke amagama agqityiweyo agcinwe ngumkhangeli wakho kwifomathi yeWebhusayithi- Igama lomsebenzisi - Iphasiwedi • Iphasiwedi ifihliwe ngokuzenzekelayo. Ukuyijonga, cofa kuyo kwaye ukhethe Iinkcukacha. Ngamanye amaxesha inkqubo iya kucela iphasiwedi yeakhawunti yakho.
Ngena. • Nangona kunjalo, unokuyibona kuphela xa inqaku linikwe amandla. Kwi-Opera: • Yiya kwi Imenyu / Useto / Ubucala nokhuseleko / Veza onke amagama okugqitha. • Le menyu iqulethe onke amagama agqithisiweyo agciniweyo ngumkhangeli wakho kwifomathi yeWebhusayithi- Igama lomsebenzisi- Iphasiwedi • Ngokuzenzekelayo, ipaswedi ifihliwe.
Ukuyibonisa, cofa kuyo kwaye ukhethe Iinkcukacha. Ngamanye amaxesha inkqubo iya kucela iphasiwedi yeakhawunti yakho. Ngena. • Basindiswa kuphela ukuba lo msebenzi uyasebenza.
Lo msebenzi wenziwe ngokusesikweni. • Ukuba kukho imfuneko, cima lo msebenzi uze ufake ii-logins kunye neepassword ngalo lonke ixesha. KwiMozilla Firefox: • Yiya kwi Imenyu / Ubumfihlo nokhuseleko / iiFom kunye neePassword / iiLogins eziGciniweyo • Le menyu iqulethe onke amagama okungena kunye neephasiwedi ezigcinwe sisikhangeli sakho.
Kwifomathi yeWebhusayithi- Igama lomsebenzisi-Elitshintshiwe okokugqibela • Ngokuzenzekelayo, amagama okugqitha awaboniswanga. Ukuzijonga, cofa iqhosha lokubonisa iiPassword. • Ukuba awufuni ukuba ipassword yakho kunye ne-logins igcinwe- khubaza eli nqaku kwaye ufake ngesandla amagama kunye neepassword ngalo lonke ixesha ndiqaphele ukuba ngokungafaniyo nakwezinye izikhangeli, iMozilla Firefox ayifuni iphasiwedi yeakhawunti yakho yeWindows ukubonisa ukungena kunye neephasiwedi kwisikhangeli.
IMozilla inegama eliyimfihlo lokungena ngenxa yesi sizathu. Ukuba uyimisile, akukho mntu uya kubona ukungena kwakho kunye neepassword ngaphandle kwakho. Kwaye iMicrosoft Edge: • Yiya kuseto / Useto oluPhambili / Jonga iiSetingi eziPhambili / Lawula iiPassword zam eziGciniweyo • Le menyu inawo onke amagama agciniweyo agcinwe ngumkhangeli wakho kwifomathi yeWebhusayithi- Igama lomsebenzisi- Iphasiwedi.
Andinawo amangeniso amaninzi apha njengoko ndingasebenzisi iEdge. Umzekelo nje. • Kule menyu, nangona kunjalo, unokucima okanye utshintshe iphasiwedi egciniweyo, kodwa ungayibonakalisi.
Kuba i-Edge sisikhangeli esidityaniswe kwinkqubo kunye nenkqubo yokudibanisa ukhuseleko kunye nolunye useto lweWindows, ulwazi lwayo lweakhawunti lugcinwa kwindawo ekhethekileyo yenkqubo. Ukuyijonga: • Yiya kwiPaneli yokuLawula / uMphathi weCredential / Web CredentialsYiya kwisitishi sethu ukuze ubukele inqaku malunga nepaneli yokulawula kunye nokuqaliswa kwayo. Ungafumana ikhonkco kwinkcazo: • Zonke • iiNgcaciso zokungena kunye neePassword ezigcinwe nge-Edge zigcinwa apha. Ukutshintsha nayiphi na ipassword a Ukuyijonga, cofa utolo ecaleni kwegama lewebhusayithi. Ecaleni kwePassword. Uyakufuna kwakhona ukufaka iphasiwedi yeakhawunti yakho.
Ngena kwi sistim. Ukuba usebenzisa i-Chrome Sync kunye neAkhawunti kaGoogle, onke amagama ongena kuwo aya kuba kwaye amagama agqithisiweyo ayavumelaniswa ngokuzenzekelayo neakhawunti yakho kaGoogle, ungazijonga zonke kwiphepha lakho leakhawunti kuGoogle - passwords.google.com ndikunika ikhonkco kwinkcazo : ziyavumelaniswa kuzo zombini izixhobo zekhompyuter kunye nezixhobo ze-Android. • Ukubonisa iphasiwedi, khetha Veza. • Ukususa ipassword, khetha Susa.
Makhe ndithethe amagama ambalwa malunga nokugcwalisa ngokuzenzekelayo kwiibrawuza, ezihlala zikufutshane nenqaku lokugcina amagama agqithisiweyo kwiiwebhusayithi. Lo msebenzi uyafana nokugcina amagama kunye neepassword. Ngendlela efanayo, isikhangeli sakho sinokukhumbula amagama, iidilesi, iinombolo zefowuni, kunye neenkcukacha zebhanki.
Isebenza kanjani lento? • Yiya kwiwebhusayithi, umzekelo • kwaye ufuna ukuthenga (okanye ugcwalise ifom ethile okanye iphepha lemibuzo) • Xa ucofa kumabala ukufaka idatha, isikhangeli sakho ngokuzenzekelayo sicebisa ukuba usebenzise idatha esele igciniwe. Khetha ngokulula ukhetho olufunayo. • Ebhankini, iyafana nedatha yekhadi.
Xa ufaka idatha kwicandelo elithile, iibrawuza zihlala ziphakamisa ukugcina olo lwazi. Unokujonga idatha egcwalisa ukugcwalisa ngokuzenzekelayo kwimenyu yokukhangela i-AutoFill yakho okanye ungabafumana kuseto lokungena kunye negama lokugqitha. Umzekelo kwi-Yandex Browser: • Yiya kwi-Menu / Useto / Advanced / amagama agqithisiweyo kunye neefom / Lawula amagama okugqitha okanye ikhadi lebhanki.
Ingoma yeaudio yangempela
Useto olunje lukhangeleka lufana nezinye iibrawuza. Ndiyaqikelela andinyanzelekanga ukuba ndingene kuwo onke. Ukuthetha ngezikhangeli ezisetyenziselwa ii-smartphones, zonke zinemisebenzi efanayo kunye noseto.
Umzekelo inguqulelo yeselfowuni ye-Chrome: • Yiya kwimenyu / Useto / amagama agqithisiweyo ukubona onke amagama agqithisiweyo. • Ukusuka apha ungaya nakwiphasiwedi ye-phassword.google.com endiyichazile namhlanje. • Kwi-AutoFill kunye nemenyu Iintlawulo zikuvumela ukuba ujonge iidilesi ezigciniweyo kunye neenkcukacha zekhadi okanye ukongeza enye idatha.
Kwiinguqulelo ezihambayo zesikhangeli, izinto zemenyu zinokuba namagama ahlukeneyo, kodwa into iyafana. Ungacima ukungena kwegama eligciniweyo kunye neephasiwedi, kunye nenye idatha yokugcwalisa ngokuzenzekelayo, kwiimenyu ezifanayo ozijonga ngazo. Khetha ngokulula 'Susa' okanye 'Cima' ecaleni kwegama eligqithisiweyo, okanye ucofe i icon emise okomnqamlezo okanye uphawu lwenkunkuma.
Nangona kunjalo, kuphela yiMozilla Firefox enika ithuba lokuzicima zonke ngaxeshanye ngokunqakraza 'Susa konke'. Zonke ezinye izikhangeli zinokuzicima ngokukodwa. Ungayicima yonke idatha yokugcwalisa ngokuzenzekelayo kuso nasiphi na isikhangeli ngaxeshanye neCcleaner.
Okwangoku, sinomdla kwenye yeendlela onokuyisebenzisa ngayo. Ukwenza oku: • Qalisa inkqubo kwaye uye kwimenyu yokucoca. • Into eluncedo icebisa ukukhetha idatha ofuna ukuyisusa. Kwithebhu yeWindows ungenza, phakathi kwezinye izinto, iibhokisi S ezigcinwe kwifom yolwazi kunye neephasiwedi ezigciniweyo zeMicrosoft Edge kunye neInternet Explorer. • Kwi-tab yezicelo, ungagcina iipaswedi ezigciniweyo kunye nolwazi olugciniweyo kwabanye bakho Jonga iibrawuza ezisetyenziswayo. • Khetha ukhetho lwakho kwaye ucofe uHlahlela • Xa igqityiwe, cofa u 'Sebenzisa ucoceko.' Ngenxa yoko, zonke iifom ezizaliswe ngokuzenzekelayo kunye neephasiwedi ezigciniweyo ziya kususwa.
Yiyo yonke loo nto okwangoku. Ukuba uyalifumana eli nqaku liluncedo, cofa iqhosha u-Like elingezantsi kwaye ubhalise Joyina ijelo lethu ukubona ngakumbi. Enkosi ngokubukela.